कतारले तोक्यो न्यूनतम पारिश्रमिक, आगामी जनवरीदेखि नेपाली श्रमिकले कति पाउँछन् ? – ताजा समाचार
काठमाडौं । कतारले आफ्नो देशमा काम गर्न आउने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकको दर तोकेको छ । साथै काफला पद्धती हटाइएको निर्णय पनि गरेको छ । सबै देशका कामदारलाई समान रुपमा लागू हुने गरी न्यूनतम तलब तोक्ने कानुन बुधबार पारित गरिएको हो । यो कानुन आउँदो जनवरीदेखि कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।
र यो पनि पढ्नुहोस् : कतारको विकासमा नेपालीको पसिना निकै धेरै परेको छ, नेपाल प्रति बढी नै आभारी छौँ : युसुफ विन महोम्मद
बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा कतार पुगेका एक नेपाली युवक ।
र यो पनि पढ्नुहोस : कतारमा रंगशाला बनाउँदै नेपाली श्रमिक– १६ घन्टा काम, न सम्पर्क, न दाम !
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : December 10th, 2019,
उडान नहुँदा ११ नेपालीको शव यूएईमै रोकियो,…
मलेसियामा फेरि ‘लकडाउन’को अवधि थप दुई हप्ता…